Ny sidina mpandeha vahiny voalohany avy any Islamabad dia miorina amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Ny sidina mpandeha vahiny voalohany avy any Islamabad dia miorina amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Pakistan Breaking News • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nilaza ny mpitondra tenin'ny Pakistan International Airlines tamin'ny faran'ny herinandro fa maniry hanohy ny serivisy ara-barotra mahazatra ny zotram-piaramanidina, saingy tsy ho ela dia hiteny hoe impiry ny fiasan'ny sidina eo anelanelan'ny renivohitra roa.
Pakistan International Airlines dia manidina any Kabul avy any Islamabad.
Tsy nazava na sidina efa niasa na charter izany.
Olona manodidina ny 70 no nandao an'i Kabul ho any an-drenivohitra pakistaney tao anatin'ny sidina PIA.
Ny sidina Pakistan International Airlines avy any Islamabad no lasa sidina mpandeha vahiny voalohany miantsona ao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul hatramin'ny nahalasan'ny Taliban an'i Afghanistan.
Ny fiaramanidina mpandeha PIA mitondra mpandeha vitsivitsy monja dia tonga teny amin'ny seranam-piaramanidin'i Kabul androany, miaraka amin'ny “olona 10 eo ho eo… mety ho mpiasa betsaka kokoa noho ny mpandeha,” hoy ny iray tamin'ireo olona tao anatiny.
Tsy fantatra mazava raha ny Pakistan International Airlines Ny sidina dia nosokajiana ho sidina ara-barotra voakasa na satan'asa ara-barotra manokana.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny PIA tamin'ny faran'ny herinandro fa vonona sy vonona ny hanohy serivisy ara-barotra mahazatra ny mpitatitra, saingy tsy ho ela dia hiteny hoe impiry ny fiasan'ny sidina eo anelanelan'ny Islamabad sy Kabul.
Seranam-piaramanidina Kabul simba be nandritra ny famoahana korontana olona maherin'ny 120,000 izay nifarana tamin'ny fisintahan'ny tafika amerikana tamin'ny 30 aogositra.
Ny terminal sy ny tetezana ary ny fotodrafitrasa teknika dia simba be ny andro taorian'ny nihodinan'ny Taliban tao Kabul ny 15 aogositra lasa teo, raha olona an'arivony maro no nanafika ny seranam-piaramanidina tamin'ny fanantenana ny handositra ny tanàna.
Ny Taliban dia nihazakazaka naka ny seranam-piaramanidina indray niaraka tamin'ny fanampiana ara-teknika avy any Qatar, Torkia ary firenena hafa.
Ny famerenana ny sidina ara-barotra dia ho fitsapana lehibe ho an'ny vondrona mpampihorohoro, izay nanome toky hatrany fa hamela ny Afghana hanana antontan-taratasy mety hiala malalaka ny firenena.
Qatar Airways dia nampandeha sidina marobe niorenan'ny sambo niala tany Kabul tamin'ny herinandro lasa teo, izay nitondra ny ankamaroan'ny vahiny sy Afghans izay diso anjara tamin'ny famindrana.
Nanohy ny fanompoana an-trano i Ariana Afghan Airlines tamin'ny 3 septambra.
Ny sidina PIA dia nanao sidina niverina tany Islamabad fotoana fohy taorian'ny niantsorohany tao Kabul ny alatsinainy teo.
Olona manodidina ny 70 no tao anaty sidina nankany amin'ny renivohitra Pakistaney, ny ankamaroan'ny Afghana izay havan'ireo mpiasa miaraka amina fikambanana iraisam-pirenena, araka ny filazan'ny mpiasa eo amin'ny seranam-piaramanidina.